Posted by ညီရဲသစ် at 12:47
တောက်ပကြယ်စင် 29 September 2011 at 13:50
ကိုရဲရေ ဗွီဒီယိုကား ကြည့်နေရသလိုပဲ။ သေချာကို ရေးထားတာပါလား။ ဖတ်ရတာ ချောမွတ်နေပြီး တစ်ချက်မှတောင် ခလုတ်မတိုက်ပါ။ ဘုန်းဘုန်းက ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သာ မရေးတတ်တာဗျ။ သူများရေးတာကိုတော့ ကောင်း၏၊ ဆိုး၏ မြင်တတ်တယ်။ ဟီး။
မဒမ်ကိုး 29 September 2011 at 15:45
မေးလျှင် ကိုရဲ သည် ဒိုးကန်၏ဆရာဟု့ဖြေပါမည်။
လက်သီးဖြင့်ထိုးလာထိုးလျှင် ကိုယ့်ဟာကိုယ်သာခံပါလော့ ဆရား)
Cameron 29 September 2011 at 15:57
ဆူးညံ့ပွက်လောရိုက်ပြီး ရန်ဖြစ်တတ်တဲ့ မြန်မာဗီဒီယိုကားတစ်ကားကို ကြည့်နေရတဲ့အတိုင်းပဲ.. ပီပြင်ပါပေတယ်...။
Anonymous 29 September 2011 at 17:49
ကိုရဲ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို ပုံဖော်ရေးထားသလိုပါပဲလား..။ ချက်ကောင်းဆိုတာ အဲသလိုတဲ့လား :D
နေ၀သန် 29 September 2011 at 18:14
:D... အဲလိုချည်းပြောပြလိုက်ရင် ဘလော့ခ်ဂါကိုကိုတွေတော့ အညှာကိုင်ခံရတော့မှာပဲ... ဟားဟား... ဒါနဲ့ ဖတ်လို့တော့ အတော်ကောင်းပါပေ့..း)))
SHWE ZIN U 29 September 2011 at 19:44
အပေါ်က မဒိုးကန် ကတော့ နည်းယူသွားပြီ.. ကိုရင်တော့ ဟားးးးးးးးးးး
ညိမ်းနိုင် 29 September 2011 at 19:50
ဟိုက်......ကိုရင် ဒွတ်ခရောက်ရင် ညီတော့ တရားခံဖြစ်ပြီ.....:))))
မဖြစ်သေးဘူး....တော်ကြာ ကိုယ်တွေပါ တရာလိုပြသက်သေဖြစ်နေဦးမယ်...
An Asian Tour Operator 29 September 2011 at 21:07
အောင်မငီးးးးး ကြောက်စရာကြီးပါလား ဟရို့
8Yar 29 September 2011 at 22:21
တိန်! တွားပြီ.... နိုင်ကွက်တွေမှပြောပြရ သလားဗျာ။ အစ်ကိုညီရဲ လူဆိုး... :D ဟတ်ဟတ်ဟတ် အားပေးသွားပါတယ်ဗျိုး။
ကိုဇော် 29 September 2011 at 22:30
လူဇိုး . . .
ဒီပို့စ်ကို သူ့ကို ပေးဖတ်လို့ မဖြစ်ဘူး . . ငါ့နှယ်နော်။
Candy 29 September 2011 at 23:27
ဟားဟား... ရီလည်းရီရတယ်.. ဒါပေမယ့် ချစ်လို့ယူထားပြီးမှ ဘာလို့များ အဲ့လောက်နာကျင်အောင် လုပ်ကြလည်း မသိဘူးနော်.... :(
blackroze 30 September 2011 at 03:54
...အလင်းစက်များ 30 September 2011 at 06:23
အလိုလေး ကြက်သီးတွေ ထလိုက်တာနော်........ ဟီးဟီး အဲ့ဒါကြောင့် လူပျိုကြီးလုပ်နေတာ.... ဟဲဟဲ မစွံလို့မဟုတ် :P :P :P
စံပယ်ချို 30 September 2011 at 20:52
(ပြသနာဖြစ်ပါက jas မသိပါ ညီရဲသစ်ကရေးပြလို့လိုက်လုပ်ရတာပါ)
Anonymous 1 October 2011 at 09:38
လတ်စသတ်တော့ ကိုဘလက်က အမျိုးသမီးထုအတွက် လက်ချာပေးထားတာကိုးးးးးး
သေသေချာချာ မှတ်ထားလိုက်ပီနော်.... :D :D
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) 1 October 2011 at 14:42
အရက်သမားမိန်းမတွေကို ဒီအကြံလေး ပေးရရင် မဆိုးဘူး အသုံးဝင်မယ်း)
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy!3October 2011 at 07:33
အကိုကတော့ လုပ်ပြီ :):)
မအိမ်သူ4October 2011 at 00:46
အဲ..အတော်လက်သံပြောင်တဲ့ မလုံးပဲ။ အမတော့ အဲဒီလိုသတ္တိမရှိပါတော်.. ရိုက်ရင်လဲခံရုံပဲရှိမယ်...း))
မြစ်ကျိုးအင်း5October 2011 at 23:13
လည်ပင်းကိုညစ်ပြီး ဒူးနဲ့တိုက်လိုက်တာ နေမှာပါး))